Shina: Misy Fanarahamaso Faobe Atao Amin’ny Finday Matoa Tratran’ny Famoretana Ny Fivarotan-tena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2014 1:59 GMT
Nanatontosa fanenjehana faobe amin'ny fivarotan-tena ao Dongguan, foiben'ny orinasan'ny fijangajangana malaza ao Atsimon'i Shina ny governemanta Shinoa.
Ankoatra ny fanadihadiana [en] tao amin'ny Fahilavitra CCTV mikasika ny kolikoly ao amin'ny orinasan'ny fijangajangana ao Dongguan, namoaka sarintany fivezivezen'ny olona maharitra adin'ny valo ao an-tanànan'i Donguan ny Sina Weibo ofisialy, izay sokajiana fa lalana fandosiran'ireo “mpivarotena” sy “mpanjifa” nandritra ny famoretana. Navoakan'i Baidu Qianxi tamin'ny tahiry avy amin'ny sarintany Baidu, tondroin'ny sarintany fa “mitsoaka” any Hong Kong ny ankamaroan'ireo olona mandositra ny famoretana.
Sarintanin'ny Baidu ahitana ireo olona mivezivezy mandritra ny adin'ny valo nandritra ny famoretana ny fivarotan-tena tao an-tanànan'i Donguan navoakan'ny kaonty ofisialy Sina Weibo. Sary avy amin'ny Apple Daily.
Tany amboalohany, noforonina ho fitaovana fanarahamaso afaka mandrakitra an-tsarintany ny fivezivezen'ny olona mandritra ny Taom-baovao Shinoa ny Baidu Qianxi. Saingy araka ny nasongadin’[zh] i Luo Changping ao amin'ny Letscorp, ny fahazoan'ny Baidu Qianxi ireo tahiry mikasika ny famoretana ny fivarotantena dia ahafaha-mieritreritra fa mampiasa fanarahamaso (fitsikilovana) faobe ho fanarahan-dia izany zava-mitranga izany ireo manampahefana, fa tsy mikendry ireo olona ahiahiana fotsiny, ary avy amin'izany dia manitsakitsaka ny fiainana manokan'ireo olom-pirenena Shinoa tsy tambo isaina.
Nanamarika [zh] ireo bilaogeran'ny teknolojia sasany tahaka an'i Lui Xuewen fa mamitaka tanteraka ilay lazaina fa “lalam-pandosirana” asehon'ny sarintany satria misy antony hafa no mahatonga ilay firohotry ny olona. Raha ny marina, mandritra ny andro fiasana, marobe ny olona mivezivezy ao amin'ireo tanàna roa ireo satria olona avy ao Hong Kong avokoa no tompon'ireo orinasa maro ao Dongguan.
Ny fampiasana teknolojia fanarahamaso ara-jeografika tamin'ity famoretana nataon'ny antoko komonista Shinoa ity dia mampiseho amin'ny vahoaka fa afaka manaramaso finday ary mahita ny mombamomba ny olona tsirairay avy ny polisy manampahefana amin'ny alalan'ny fampiasana ny Baidu sy ireo mpandrafitra fampiharana finday hafa, satria mifandray amin'ny karampanorondron'ny tompony ny ankamaron'ireo nomerao finday rehetra ao Shina. Manoloana ity fandrahonana ity, nilaza ireo mpiserasera marobe ao Hong Kong fa mikasa hamono ny findainy izy ireo rehefa mandeha ao Shina.